यस्तो अ’चम्मको गडियाघाट मा’ताको मन्दिर जहाँ पानीबाट दी’यो बा’लिन्छ ! – " कञ्चनजंगा News "
यस्तो अ’चम्मको गडियाघाट मा’ताको मन्दिर जहाँ पानीबाट दी’यो बा’लिन्छ !
No Comments on यस्तो अ’चम्मको गडियाघाट मा’ताको मन्दिर जहाँ पानीबाट दी’यो बा’लिन्छ !
संसारका केहि ठाउँमा अचम्मका घटनाहरु घटिरहन्छन् । भगवानलाई कसैले मान्छ’न् त कसैले मा’न्दैनन पनि । भगवानलाई जुन ठाउँका मा’निसहरुले मान्दैनन् त्यहि ठाउँमा भगवानको च’मत्कारलाई धेरै विश्वास गरिन्छ । मानिसहरु प्रत्येक दिन मन्दिर जा’न्छन्, पूजा गर्छन र दीयो बाल्छन् । तर के तपाईलाई थाहा छ ?
भारतको एउटा मन्दिरमा दियो तेल, घिउबाट होइन पानीबाट बालिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स’ञ्चारमाध्यामका अ’नुसार यो म’न्दिर भारतको मध्य प्रदेश अन्तर्गत शा’जापूर जिल्लाको गडिया गा’उँमा ग’डियाघाट मा’ताको म’न्दिर छ । यो म’न्दिर का’लीसिन्ध नदीको कि’नारमा छ । स’ञ्चारमाध्यामका अ’नुसार गत ५ वर्ष यता यो मन्दिरमा घिउ, तेलबाट नभएर पानीबाट दीयो बाल्दै आइएको छ ।
पुजारी सि’द्धु सिंहका अ’नुसार यो म’न्दिरमा तेल, घिउ, डिजेल जस्ता बिभिन्न प्रकारका इ’न्धन दियो बा’ल्नको लागि चा’हिदैन । यहाँ मात्र पानीले दी’यो बल्छ । उनका अ’नुसार माताले स’पनामा आएर पानीले दि’यो बाल्ने आ’ग्रह गरेपछि पु’जारी सिंहले दी’योमा पानी हालेको र नभन्दै दीयो पा’नीबाट बलेपछि अ’चम्ममा परेका थिए । पुजारी यो च’मत्कार देखेर ड’राएका पनि थिए । उनले यो बारेमा २ महिनासम्म कसैलाई ब’ताएनन् ।
तर केहि स’मयपछि गा’उँलेलाई ब’ताउँदा गाउँलेले नै उ’क्त कुराको वि’श्वास गरेनन् । जब पूजारीले दी’योमा पा’नी हा’लेर दियो बाले तब गाउँलेको हो’स उ’ड्यो । यो मन्दिरमा का’लीसिन्ध नदी’बाट पानी ल्या’एर दियोमा हा’लीन्छ । दि’योमा पानी हा’ल्ने बित्तिकै पानी चि’ल्लो पदार्थमा परिणत हुन्छ । यो मन्दिरमा व’र्षाको समयमा भने दियो बा’लिँदैन । किनकी नदीमा अ’त्याधिक बाढी आउने हुँदा नदीले म’न्दिर छोप्छ ।
धार्मिक पर्यटनका लागि महत्वपूर्ण मानिएको दोलखाको भीमसेन मन्दिरमा व्यापारीको इष्टदेवताको रूपमा पूजा हुँदै आएको छ । काठमाडौँबाट करीब १४० किलोमिटर टाढा रहेको दोलखाको सदरमुकाम चरिकोटबाट चार किलोमिटर पूर्वतर्फ रहेको सो मन्दिरमा पूजा गरेमा व्यवासायिक रुपमा सफलता प्राप्त गर्ने मान्यता छ । प्राचीन समयमा व्यापार गर्दा वन्यजन्तु, चोर डाकाको डर हुने हुँदा भीमसेनलाई स्मरण गरेमा भयमुक्त हुने जनविश्वास छ ।
व्यवसाय गर्दा बाधा, अवरोध, विभिन्न प्रकारका सङ्कटबाटमुक्त भई व्यवसाय सञ्चालन गरेमा नाफा प्राप्त हुने आशाकासाथ व्यापारीले भीमसेनलाई इष्टदेवको रूपमा मानेका हुन् । सर्वसाधारणले भीमसेनको सामान्यदेखि ठूला ठूला पञ्चबलिका पूजासमेत गर्ने गरेका छन् । शिवशक्तिको रूपमा उक्त मन्दिरमा भैरव, भीमेश्वर, भीमसेनको पूजा गर्ने प्रचलन छ ।
शिवलाई महादेवका अर्को नामले चिनिन्छ भने भीमसेनलाई भैरवको रूपमा पशुबलिसमेत दिइन्छ । भीमसेन मूर्तिमा शिवशक्तिको रुपमा रुद्रीपूजासमेत गरिन्छ भने मनोकाङ्क्षा पूरा हुने विश्वासले बलि दिइन्छ । दोलखा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख डबल पाण्डेकाअनुसार प्राचीन मन्दिर धार्मिक पर्यटनको विकासका लागि महत्वपूर्ण रहेकाले यसको ऐतिहासिक पक्षलाई संरक्षण गर्न र आसापास क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका लागि प्रयास भइरहेको बताए ।
भीमेश्वर नगरपालिकामा रहेको भीमसेनको मूर्ति कहिले कसरी स्थापना गरिएको हो भन्नेबारे प्रष्ट आधार फेला परेको छैन् । किराँतकालीन समयमा स्थापना भएको अनुमान गरिएको छ । चिटिक्क परेको उक्त मूर्ति चिल्लो खरीको प्रस्तरबाट बनेकाले आकर्षित देखिन्छ । यसको विशेषता भनेको मुलुकमा विपत् आउन लागेको समयमा पूर्व सूचनाका रुपमा लिइएको छ । मूर्तिमा पसिना आएपछि विशेष प्रकारको पूजा गर्ने परम्परा छ ।
← मुस्ताङमा पुगे ५७ हजार पर्यटक → सर्वसाधारणलाइ ठग्ने र दुख दिने गुनासो आएपछि, जब एसएसपी बस र ट्याक्सीको यात्रु बने (हेर्नुहोस फोटो सहित)